9 Nooc Oo Ragga Kamid Ah Oo Ay Tahay In Gabar Walba Ay Heshaa - Aayaha
Gabar ahaan, nin noocee ah ayaad u rabtaa noloshaada?
Kan ku siiya talo wax ku ool ah
Talada wanaagsan waxay kaa caawisaa inaad sameyso go’aan wanaagsan; gabar kasta waa inay heshaa nin talo wanaagsan siinaya — mid talada uu ku siiyo ay kaa caawinayso xalinta dhibaatooyinka ku heysta ama inaad sameysid go’aan wanaagsan oo noloshaada ku caawinaya.
Kan daneynaya berridaada
Gabar kasta waxay mudantahay inay hesho nin si daacad ah u daneynaya mustaqbalkeeda, iyo sida ay u noqon lahayd qof wanaagsan oo wax qabsata. Ninka noocaan ah wuxuu had iyo jeer noqonayaa geesiga noloshaada.
Kan aanan kugu rabin arrimo galmo
Xaqiiqda waala sheegay, ragga qaarkood waxay kugu rabaan galmo oo kaliya. Waxaa qalad kugu ah inaad heysatid nin uun kugu raba arrimo galmo iyo wixii lamid ah.
Gabar kasta waxay mudantahay inay hesho nin aanan ku rabin galmo kaliya balse si daacad ah u doonaya inuu noloshaada qeyb uga noqdo.
Kan raba wanaagaaga
Gabar kasta waa inay raadisaa nin doonaya wanaageeda iyo sidii ay unoqon lahayd qof wanaagsan oo wax tar leh. Waxaa muhiim ah in gabadha ay ogtahay waxa u wanaagsan nafteeda iyo waxa uu ninka ay heysato markaas uu daneynayo wanaag iyo xumaan.
Kan dareenka wanaagsan
Dabcan, dhaawac malahan inaad heshid nin kaa qoslin kara wayna wanaagsantahay inaad heysatid qof noocaas ah. Saaxiib kaa qoslin kara aad ayuu muhiim kuugu yahay.
Kan sida dhabta ah kaaga fekera
Gabar kasta waxay mudantahay inay hesho nin si dhab ah ujecel ugana fekera; nin si daacad ah u daneynaya xaaladdeeda iyo sida ay tahay.
Kan aad isku haleyn kartid
Way wanaagsantahay inaad heshid nin aad ku tiirsanaatid ama aad isku haleyn kartid noloshaada, haddii uu noqon lahaa saaxiibkaa ama lamaankaaga. In oqf noocaas ah aad nolosha ku heysatid waxay ku siineysaa hubin gaar ah.
Kan kaa farxiya
Qof kasta ayaa farxad u raba noloshiisa maxaana ka fiican inaad nolosha ku heshid nin noocaas ah oo kaa farxin kara intii aad heysan lahay mid aanan hal mar kaa farxin Karin.
Kan ku dhiiri galiya
Had iyo jeer waa muhiim inaad heshid qof ku dhiiri galiya marak ay xaaladda kugu xuntahay. Nolosha waxay noqon kartaa mid culeys ah mararka, maxaana ka wanaagsan inaad heysatid qof culeyskaas kaa yareyn kara mararka qaar.
Ninkaaga tilmaamahan ma leeyahay?